မြန်မာနိုင်ငံမှာ အခုလို မိုးရာသီဝင်လာချိန် အဖြစ်များလေ့ရှိတဲ့ ဝမ်းပျက် ဝမ်းလျှောရောဂါအတွက် ကြိုတင်ကာကွယ် ပြုစုနိုင်တာတွေ သိထားသင့်တယ်လို့ ကျန်းမာရေးပညာရှင်တွေက ဆိုပါတယ်။
မိုးရာသီ သီးနှံပေါ်ချိန် မသန့်တာနဲ့ ယင်နားစာတွေ စားမိတာကနေ အဓိက ကူးနိုင်တဲ့ ဝမ်းရောဂါ ဗိုင်းရပ်စ်ပိုးကြောင့် အခုလို အဖြစ်များလေ့ရှိတာပါ။ ဒီနှစ်မှာလည်း ဆက်တိုက်အံတာပါတွေ့ထားပြီး တချို. နုံးခွေသွားကာ၊ တချို.မှာ ဝမ်းသွားကာ၊ တချို.မှာဝမ်းမသွားဘဲ၊ ဝမ်းဗိုက်နာ၊ အနည်းငယ်ဖျားတာလည်း တွေ့ထားပါတယ်။
ဒီရောဂါ ကြိုတင်ကာကွယ်ကာကွယ်နိုင်ဖို့ကတော့ သန့် (၄) သန့်ဖြစ်တဲ့၊ အစာသန့်၊ ရေသန့်၊ လက်သန့်၊ အိမ်သာသန့် အောင်လုပ်ဖို့ အရေးကြီးပါတယ်။ အစာသန့်ဖို့အတွက် ယင်ကောင်မနားစေတာ၊ ဖုံးအုပ်ထားတာအပြင်၊ သန့်ရှင်းတဲ့ ချက်ပြုတ်ပစ္စည်းတွေသုံးတာနဲ့ ချက်ပြုတ်ပြီးပြီးချင်း ပူနေချိန်စားတာက အကောင်ဆုံးပါ။ အသီးအနှံတွေလည်း အမှည့်မလွန်စေဖို့ သတိထားသင့်ပါတယ်။ ရေသန့်အတွက်လည်း သောက်သုံးရေ သန့်ဖို့လိုတာမှာ ရေသန့်ရအောင်ကြိုးစားပြီး၊ ရေသန့်မရနိုင်လျှင်တောင် ရေကိုဆူအောင် အသေအချာ ကျိုချက် သောက်သုံးသင့်ပါတယ်။ လက်သန့်ဖို့မှာလည်း အစာမစားခင်နဲ့ အိမ်သာသွားအပြီးမှာ လက်ကို ဆပ်ပြာနဲ့ စင်ကြယ်အောင် သေသေချာချာ ဆေးသင့်ပါတယ်။ အိမ်သာသန့်ဖို့ကတော့ ယင်လုံအိမ်သာထားဖို့ လိုပါတယ်။
အကယ်၍ ဝမ်းပျက် ဝမ်းလျှော ရောဂါဖြစ်လာလျှင်လည်း အန္တရာယ်ရှိတဲ့ အဆင့်မရောက်အောင် ပြုစုကုသဖို့ လိုပါတယ်။ တချို.မှာ ဆက်တိုက်အံတာအတွက် အအံပျောက်ဆေး သင့်တော်သလောက် ပေးနိုင်ပေမဲ့၊ များမသွားဖို့ လိုပါတယ်၊ တက်တာခဏတာဖြစ်လာနိုင်လို့ပါ။ ဒါပေမဲ့ ဒီအအံပျောက်ဆေးနဲ့ မလုံလောက်ဘဲ၊ ဆုံးရှုံးသွားတဲ့ ရေဓာတ်ဆားဓာတ် ပြန်ဖြည့်ဖို့က အရေးကြီးဆုံး ကုသမှုဖြစ်ပါတယ်။ အံသာအံပြီး ဝမ်းမလျှောလျှင်တော့ သာမန် ရေ ဆား သကြား အချိုရည် ဖြည်းဖြည်းချင်းတိုက်လျှင် (ဥပမာ တစ်မီးနစ် တဇွန်း) ၅ နာရီ ၆ နာရီအတွင်း ပြန်ကောင်းသွားလေ့ရှိပါတယ်။ ဒါပေမဲ့ ဝမ်းလျှောလာလျှင်တော့ ဓာတ်ဆားရည်တိုက်သင့်ပါတယ်။ အံလွန်းနေချိန်မှာတော့ တခြားအစာတွေအတင်း မကျွေးဘဲ ဓာတ်ဆားရည်မျိုး ကျေညက်လွယ်တာ နည်းနည်းနဲ့ဖြည်ဖြည်းချင်း တိုက်ပေးသင့်ပါတယ်။ အံတာရပ်လျှင်တော့ အစာပျော့ပျော့ (ဥပမာ ဆန်ပြုတ်ကျဲကျဲ၊ စွပ်ပြုတ်) မျိုးကို ဆားခပ်ပြီး စကျွေးသင့်ပါတယ်။ ဒီ ပြုစု ကုသမူက ကလေးရော လူကြီးအတွက်ပါ အတူတူဖြစ်ပါတယ်။
ဒါပေမဲ့ အံတာ မသက်သာဘဲ ဆက်တိုက်ပိုအံလွန်းလာလျှင်တော့ ဒီ ရေဓာတ်ဆားဓာတ်ပြန်ဖြည့်ရေး အကြောဆေးသွင်းပေးဖို့ အရေးကြီးပါတယ်။ အကြောင်းက အချိန်မီ ကုသမှုမရလျှင် အသက်ဆုံးရှုံးတာတွေ တခါတရံမှာ ရှိထားလို့ပါ။ ဒါက မြို.ကြီးတွေမှာထက် နယ်တွေမှာ ပိုဖြစ်နိုင်ချေ ရှိပါတယ်။ အခုလို ရေဓာတ်ဆားဓာတ် ဆုံးရှုံးတာများလွန်းသွားလျှင် ဖြစ်လာတဲ့ အန္တရာယ်လက္ခဏာတွေကတော့ နုံးခွေပျော့သွားတာ၊ မျက်တွင်းချိုင့်လာတာ၊ ပထမရေဆာလွန်းပြီး၊ နောက်ပိုင်း ရေမသောက်နိုင်အောင် ပင်ပန်းသွားတာကနေ ဆက်ပြီး ပိုစိုးရိမ်ရတဲ့ သတိမကောင်းတော့တာ၊ ခြေလက်အေးစက်လာတာ၊ သွေးပေါင်ကျတာ၊ သွေးခုန်နှုန်းစမ်းမရတော့ကာ သွေးလန့်တဲ့ (Shock) အဆင့်ထိ ရောက်သွားနိုင်တာတွေပါ။ အခုလို အန္တရာယ်လက္ခဏာတွေ အစပျိုးအဆင့်ထဲက နီးစပ်ရာ ဆေးခန်း ဆေးရုံပြ ကုသမူ ခံယူဖို့လိုပါတယ်။ ဓာတ်ဆားရည် စနစ်တကျ အချိန်မီ ပေးနိုင်ဖို့နဲ့ လိုအပ်လျှင် အကြောဆေးသွင်းဖို့ပါ။
ဝမ်းပျက် ဝမ်းလျှောရောဂါအတွက် အဓိက ကုထုံးဖြစ်တဲ့ ဒီရေဓာတ်ဆားဓာတ် ပြန်ဖြည့်ရာမှာလည်း စနစ်တကျ ပမာဏရောစပ်မူရှိဖို့ လိုပါတယ်။ ကမ္ဘာ့ကျန်းမာရေးအဖွဲ့ အသိအမှတ်ပြု ရောစပ်ထားတဲ့ ဓာတ်ဆားထုတ်ကို သတ်မှတ်ထားတဲ့ ရေပမာဏနဲ့ ဖျော်ပြီး သတ်မှတ်ချိန်အတွင်း သုံးဖို့ လိုလာတာပါ။ ရေကို အပို အလို ထည့်ဖျှော်မိကာ အချိုးအစားအမှန်တာနဲ့ အချိန်လွန်တာတွေဖြစ်လျှင်တော့ မထိရောက်နိုင်ပါဘူး။ အကြောင်းက ဒီရောစပ်မူ အချိုးမကျ အချိန်လွန်တာနဲ့ ဝမ်းလျှောပြီး ရောင်နေတဲ့ အူက မစုပ်ယူနိုင်တော့လို့ပါ။ တချို.ဓာတ်ဆားထုတ်မှာ ရောဖျော်ဖို့ရေ ၂၀၀ စီစီ နဲ့ တချို.မှာ ၁၀၀၀ စီစီ (တစ်လီတာ) သတ်မှတ်ထားတတ်တာမို့ ကျဲဖျော်တာ တစ်ထုတ်ထဲက နည်းနည်းချင်း ခွဲပြီး ဖျော်တာမျိုးတွေ လုံးဝ မလုပ်သင့်ပါဘူး။ ဒီဓာတ်ဆားရည်ဖျော်ပြီးလျှင်လည်း ၂၄ နာရီအတွင်း ကုန်အောင် သောက်သင့်ကာ၊ အချိန်လွန်သွားလျှင်တော့ အာနိသင်ပျယ်သွားတတ်တာမို့ အသစ်ထပ်ဖျော်သင့်ပါတယ်။ ဒါ့အပြင် Probiotics (ခေါ်) အူထဲပုံမှန်သက်စောင့်ဓာတ်ကို ဓာတ်ဆားထုတ်နဲ့ မမှားဖို့လည်း အရေးကြီးပါတယ်။ Probiotics က ဝမ်းသွားတဲ့ အကြိမ်နဲ့ ပမာဏသာ အနည်းငယ်လျော့စေနိုင်ပြီး၊ အဓိကလိုတဲ့ ရေဓာတ်ဆားဓာတ်ကို ပြန်ဖြည့်နိုင်တာမျိုး မဟုတ်လို့ပါ။ တချိန်ထဲမှာ ချွေးထွက်များလျှင်သောက်ဖို့ရောင်းတဲ့ သကြားဓာတ်ပိုပါတဲ့ ဓာတ်ဆားအချိုရည်ကလည်း ဝမ်းလျှောတာမှာ မထိရောက်နိုင်ပါဘူး။
ဒီအကြောင်း ကလေးအထူးကုနဲ့ ဆေးတက္ကသိုလ် (၁) ကလေးကျန်းမာ၊ပညာဌာန အငြိမ်းစား ဌာနမှူး ပါမောက္ခ ဒေါက်တာစောဝင်းကို ကိုဝင်းမင်းက မေးထားပါတယ်။
မွနျမာနိုငျငံမှာ အခုလို မိုးရာသီဝငျလာခြိနျ အဖွဈမြားလရှေိ့တဲ့ ဝမျးပကျြ ဝမျးလြှောရောဂါအတှကျ ကွိုတငျကာကှယျ ပွုစုနိုငျတာတှေ သိထားသငျ့တယျလို့ ကနျြးမာရေးပညာရှငျတှကေ ဆိုပါတယျ။
မိုးရာသီ သီးနှံပျေါခြိနျ မသနျ့တာနဲ့ ယငျနားစာတှေ စားမိတာကနေ အဓိက ကူးနိုငျတဲ့ ဝမျးရောဂါ ဗိုငျးရပျဈပိုးကွောငျ့ အခုလို အဖွဈမြားလရှေိ့တာပါ။ ဒီနှဈမှာလညျး ဆကျတိုကျအံတာပါတှထေ့ားပွီး တခြို. နုံးခှသှေားကာ၊ တခြို.မှာ ဝမျးသှားကာ၊ တခြို.မှာဝမျးမသှားဘဲ၊ ဝမျးဗိုကျနာ၊ အနညျးငယျဖြားတာလညျး တှထေ့ားပါတယျ။
ဒီရောဂါ ကွိုတငျကာကှယျကာကှယျနိုငျဖို့ကတော့ သနျ့ (၄) သနျ့ဖွဈတဲ့၊ အစာသနျ့၊ ရသေနျ့၊ လကျသနျ့၊ အိမျသာသနျ့ အောငျလုပျဖို့ အရေးကွီးပါတယျ။ အစာသနျ့ဖို့အတှကျ ယငျကောငျမနားစတော၊ ဖုံးအုပျထားတာအပွငျ၊ သနျ့ရှငျးတဲ့ ခကျြပွုတျပစ်စညျးတှသေုံးတာနဲ့ ခကျြပွုတျပွီးပွီးခငျြး ပူနခြေိနျစားတာက အကောငျဆုံးပါ။ အသီးအနှံတှလေညျး အမှညျ့မလှနျစဖေို့ သတိထားသငျ့ပါတယျ။ ရသေနျ့အတှကျလညျး သောကျသုံးရေ သနျ့ဖို့လိုတာမှာ ရသေနျ့ရအောငျကွိုးစားပွီး၊ ရသေနျ့မရနိုငျလြှငျတောငျ ရကေိုဆူအောငျ အသအေခြာ ကြိုခကျြ သောကျသုံးသငျ့ပါတယျ။ လကျသနျ့ဖို့မှာလညျး အစာမစားခငျနဲ့ အိမျသာသှားအပွီးမှာ လကျကို ဆပျပွာနဲ့ စငျကွယျအောငျ သသေခြောခြာ ဆေးသငျ့ပါတယျ။ အိမျသာသနျ့ဖို့ကတော့ ယငျလုံအိမျသာထားဖို့ လိုပါတယျ။
အကယျ၍ ဝမျးပကျြ ဝမျးလြှော ရောဂါဖွဈလာလြှငျလညျး အန်တရာယျရှိတဲ့ အဆငျ့မရောကျအောငျ ပွုစုကုသဖို့ လိုပါတယျ။ တခြို.မှာ ဆကျတိုကျအံတာအတှကျ အအံပြောကျဆေး သငျ့တျောသလောကျ ပေးနိုငျပမေဲ့၊ မြားမသှားဖို့ လိုပါတယျ၊ တကျတာခဏတာဖွဈလာနိုငျလို့ပါ။ ဒါပမေဲ့ ဒီအအံပြောကျဆေးနဲ့ မလုံလောကျဘဲ၊ ဆုံးရှုံးသှားတဲ့ ရဓောတျဆားဓာတျ ပွနျဖွညျ့ဖို့က အရေးကွီးဆုံး ကုသမှုဖွဈပါတယျ။ အံသာအံပွီး ဝမျးမလြှောလြှငျတော့ သာမနျ ရေ ဆား သကွား အခြိုရညျ ဖွညျးဖွညျးခငျြးတိုကျလြှငျ (ဥပမာ တမိနဈ တဇှနျး) ၅ နာရီ ၆ နာရီအတှငျး ပွနျကောငျးသှားလရှေိ့ပါတယျ။ ဒါပမေဲ့ ဝမျးလြှောလာလြှငျတော့ ဓာတျဆားရညျတိုကျသငျ့ပါတယျ။ အံလှနျးနခြေိနျမှာတော့ တခွားအစာတှအေတငျး မကြှေးဘဲ ဓာတျဆားရညျမြိုး ကညြေကျလှယျတာ နညျးနညျးနဲ့ဖွညျဖွညျးခငျြး တိုကျပေးသငျ့ပါတယျ။ အံတာရပျလြှငျတော့ အစာပြော့ပြော့ (ဥပမာ ဆနျပွုတျကြဲကြဲ၊ စှပျပွုတျ) မြိုးကို ဆားခပျပွီး စကြှေးသငျ့ပါတယျ။ ဒီ ပွုစု ကုသမူက ကလေးရော လူကွီးအတှကျပါ အတူတူဖွဈပါတယျ။
ဒါပမေဲ့ အံတာ မသကျသာဘဲ ဆကျတိုကျပိုအံလှနျးလာလြှငျတော့ ဒီ ရဓောတျဆားဓာတျပွနျဖွညျ့ရေး အကွောဆေးသှငျးပေးဖို့ အရေးကွီးပါတယျ။ အကွောငျးက အခြိနျမီ ကုသမှုမရလြှငျ အသကျဆုံးရှုံးတာတှေ တခါတရံမှာ ရှိထားလို့ပါ။ ဒါက မွို.ကွီးတှမှောထကျ နယျတှမှော ပိုဖွဈနိုငျခြေ ရှိပါတယျ။ အခုလို ရဓောတျဆားဓာတျ ဆုံးရှုံးတာမြားလှနျးသှားလြှငျ ဖွဈလာတဲ့ အန်တရာယျလက်ခဏာတှကေတော့ နုံးခှပြေော့သှားတာ၊ မကျြတှငျးခြိုငျ့လာတာ၊ ပထမရဆောလှနျးပွီး၊ နောကျပိုငျး ရမေသောကျနိုငျအောငျ ပငျပနျးသှားတာကနေ ဆကျပွီး ပိုစိုးရိမျရတဲ့ သတိမကောငျးတော့တာ၊ ခွလေကျအေးစကျလာတာ၊ သှေးပေါငျကတြာ၊ သှေးခုနျနှုနျးစမျးမရတော့ကာ သှေးလနျ့တဲ့ (Shock) အဆငျ့ထိ ရောကျသှားနိုငျတာတှပေါ။ အခုလို အန်တရာယျလက်ခဏာတှေ အစပြိုးအဆငျ့ထဲက နီးစပျရာ ဆေးခနျး ဆေးရုံပွ ကုသမူ ခံယူဖို့လိုပါတယျ။ ဓာတျဆားရညျ စနဈတကြ အခြိနျမီ ပေးနိုငျဖို့နဲ့ လိုအပျလြှငျ အကွောဆေးသှငျးဖို့ပါ။
ဝမျးပကျြ ဝမျးလြှောရောဂါအတှကျ အဓိက ကုထုံးဖွဈတဲ့ ဒီရဓောတျဆားဓာတျ ပွနျဖွညျ့ရာမှာလညျး စနဈတကြ ပမာဏရောစပျမူရှိဖို့ လိုပါတယျ။ ကမ်ဘာ့ကနျြးမာရေးအဖှဲ့ အသိအမှတျပွု ရောစပျထားတဲ့ ဓာတျဆားထုတျကို သတျမှတျထားတဲ့ ရပေမာဏနဲ့ ဖြျောပွီး သတျမှတျခြိနျအတှငျး သုံးဖို့ လိုလာတာပါ။ ရကေို အပို အလို ထညျ့ဖြှျောမိကာ အခြိုးအစားအမှနျတာနဲ့ အခြိနျလှနျတာတှဖွေဈလြှငျတော့ မထိရောကျနိုငျပါဘူး။ အကွောငျးက ဒီရောစပျမူ အခြိုးမကြ အခြိနျလှနျတာနဲ့ ဝမျးလြှောပွီး ရောငျနတေဲ့ အူက မစုပျယူနိုငျတော့လို့ပါ။ တခြို.ဓာတျဆားထုတျမှာ ရောဖြျောဖို့ရေ ၂၀၀ စီစီ နဲ့ တခြို.မှာ ၁၀၀၀ စီစီ (တဈလီတာ) သတျမှတျထားတတျတာမို့ ကြဲဖြျောတာ တဈထုတျထဲက နညျးနညျးခငျြး ခှဲပွီး ဖြျောတာမြိုးတှေ လုံးဝ မလုပျသငျ့ပါဘူး။ ဒီဓာတျဆားရညျဖြျောပွီးလြှငျလညျး ၂၄ နာရီအတှငျး ကုနျအောငျ သောကျသငျ့ကာ၊ အခြိနျလှနျသှားလြှငျတော့ အာနိသငျပယျြသှားတတျတာမို့ အသဈထပျဖြျောသငျ့ပါတယျ။ ဒါ့အပွငျ Probiotics (ချေါ) အူထဲပုံမှနျသကျစောငျ့ဓာတျကို ဓာတျဆားထုတျနဲ့ မမှားဖို့လညျး အရေးကွီးပါတယျ။ Probiotics က ဝမျးသှားတဲ့ အကွိမျနဲ့ ပမာဏသာ အနညျးငယျလြော့စနေိုငျပွီး၊ အဓိကလိုတဲ့ ရဓောတျဆားဓာတျကို ပွနျဖွညျ့နိုငျတာမြိုး မဟုတျလို့ပါ။ တခြိနျထဲမှာ ခြှေးထှကျမြားလြှငျသောကျဖို့ရောငျးတဲ့ သကွားဓာတျပိုပါတဲ့ ဓာတျဆားအခြိုရညျကလညျး ဝမျးလြှောတာမှာ မထိရောကျနိုငျပါဘူး။
ဒီအကွောငျး ကလေးအထူးကုနဲ့ ဆေးတက်ကသိုလျ (၁) ကလေးကနျြးမာ၊ပညာဌာန အငွိမျးစား ဌာနမှူး ပါမောက်ခ ဒေါကျတာစောဝငျးကို ကိုဝငျးမငျးက မေးထားပါတယျ။